Inzululwazi yezeNdalo: Yintoni i-Hydrogen Bonding?
Ngu-Alecia M. Spooner
Xa ufunda isayensi yendalo esingqongileyo, olunye uhlobo lwebhondi ye-athomu ekufuneka uyazi kunye ne-hydrogen bond. A ibhondi yehydrogen iziphumo xa ezinye zee-athomu ezikwi-molecule edibeneyo zidonsa ii-electron ezabelwana ngazo kwelinye icala le-molecule, ukudala ukungalingani kombane kwi-molecule. (Khumbula ukuba ii-elektroni zinexabiso elibi lombane.)
Xa ukungalingani kwentlawulo yombane kwenzeka ngaphakathi kwemolekyuli, imolekyuli kuthiwa yiyo indawo emhlophe okanye ukubonisa Ubuninzi - kwimeko apho isiphelo esinye sinentlawulo elungileyo kwaye enye inesityholo esibi (njengemagnethi).
Imolekyuli polar isebenza kancinci njenge-atom efuna i-electron. Ukuphela kwayo okuqinisekileyo kutsaleleke kwizinto ezihlawuliswe kakubi ezingqonge yona-ubukhulu becala ngamacala ahlaselwe kakubi kwezinye iimolekyuli ze-polar.
Owona mzekelo uqhelekileyo we-hydrogen bonding ubandakanya iimolekyuli zamanzi. Eli nani libonisa indlela ukudibana phakathi kweoksijini nehydrogen kudala ukungalingani kombane kwiimolekyuli zamanzi kwaye, ngenxa yoko, isiphelo esibi semolekyuli enye yamanzi sitsala kwiziphelo ezilungileyo zenye iimolekyuli zamanzi ezenza iibhondi zehydrogen.
Iibhondi ze-Hydrogen zibuthathaka xa kuthelekiswa ne-covalent and ionic bond, kodwa ezi zibophelelo zibuthathaka zidlala indima ebalulekileyo kwindalo nakwizinto eziphilayo. Kubalulekile ekwenzeni imixokelelwane ye-DNA, kwaye zinika amanzi angamanzi ezinye iipropathi ezibonakala ngathi zomlingo.
Iindleko ze-prednisone ngaphandle kwe-inshurensi
wena (ngokusesikweni) ngesiSpanish
mucinex d vs sudafed
ithamo lokukhutshelwa le-ibuprofen
isithethi senkcazo yendlu
isicaphucaphu amayeza lokukhulelwa